Madrid: tanàna manintona iray miala ny renivohitra | Vaovao momba ny dia
Tanàna mahafinaritra manakaiky an'i Madrid
Luis Martinez | | soso-kevitra, España, Inona no ho hita
Madrid dia iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra ary cosmopolitan any Eropa. Afaka mahita tranombakoka mahafinaritra be ao ianao ao lova lehibe, ny seho tsara indrindra, gastronomia mahafinaritra ary mahafinaritra be mandritra ny andro sy amin'ny alina.
Na izany aza, tena akaiky an'i Madrid ianao dia afaka mahita tanàna izay manome hatsarana manokana ary tsy misy ifandraisany amin'ny korontana amin'ny tanàna lehibe izany. Raha te hahafantatra azy ireo ianao ary hampihatra ny fizahan-tany any ambanivohitra dia hasehonay anao ny sasany amin'izy ireo.
1 Buitrago del Lozoya
2 San Lorenzo del Escorial
4 Manzanares el Real
5 Patones avy any ambony
Any amin'ny enim-polo kilometatra monja miala an'i Madrid sy eo am-pototry ny Sierra de Guadarrama no ahitanao ity tanàna tsara tarehy ity izay avy amin'ny renirano manodidina azy no ahitanao ny anarany. Manasongadina ny azy fefy rindrina, nanomboka tamin'ny taonjato faha-1931. Azonao atao ny miditra amin'ny tampony amin'ny alàlan'ny tohatra ary io dia tsangambaton'ny firenena hatramin'ny XNUMX. Ampahany amin'ny Lapan'i Buitrago, miaraka amin'ireo tilikambo fito sy ny endriny Gothic-Mudejar.
Ny fomba tsara indrindra hitsidihana an'i Buitrago dia an-tongotra. Azonao atao ny mamela ny fiaranao any ivelany ary miditra ny tanàna amin'ny alàlan'ny Bridge Tetezana, nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Raha vantany vao ao an-tanàna ianao dia liana amin'ny fahitana ny fiangonan'i Santa Maria, izay nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ihany koa, na dia miendrika gothic flamboyant aza ny maso ary naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Toy izany koa, ny tilikambony dia ohatra mahatalanjona amin'ny fomban'ny Mudejar. Ary tokony hitsidika ny Trano ala, namboarina tamin'ny fomba villa italianina tamin'ny taonjato faha-XNUMX ho fampiononana ny Duke of Infantado.
Buitrago rehetra dia manana ny sokajy Kompana ara-tantara-kanto Ary tsy tokony hafoinao izany raha tsy manandrana ny lasopy Castilian, ny tsaramaso ary ny zanak'ondry minono na ny kisoa minono.
Ity tanàna ity dia fantatra manerantany amin'ny monasiterany malaza, izay nasain'ny Mpanjaka Felipe II hatsangana. Ity asa lehibe ity dia antsoina hoe, na dia eo akaikin'ny monasitera aza dia manana ny lapan'ny mpanjaka, ny basilika, ny pantheon ary ny tranomboky. Ny fombany dia maneho ny fifindrana avy any Plateresque mankany amin'ny Classicism ary nofaritana ho "fahagagana fahavalo an'izao tontolo izao."
Na izany aza, manana toerana mahaliana maro hafa ny El Escorial. Ohatra, ny trano kelin'ny Andriana sy ny Zaza, lapa roa tamin'ny taonjato faha-XNUMX namboarina manaraka ny kanônanina neoklassical; ny trano fivarotana, noho ny mpanao mari-trano Juan de Herrera sy Juan de Villanueva; ny Royal Coliseum an'i Carlos III, teatra kely izay nantsoina malaza hoe "La Bombonera", na ny Lohasahan'ny Fahalavoana.
Alamino ny dianao
Mamandraha FLIGHT ho an'ny dianao
Fandriho ny HOTEL amin'ny dianao
Ny EXCURSIONS sy ACTIVITIES tsara indrindra amin'ny Espaniôla
Manofa fiara ho an'ny dia
Mahazoa TRAVEL INSURANCE miaraka amin'ny fihenam-bidy 5%
Famandrihana ny TRANSFER anao avy amin'ny seranam-piaramanidina
Amin'ny lafiny iray, Fambolena La Herrería sy El Castañar Manana sanda ekolojika goavambe izy ireo, miaraka amin'ny ala oaka sy lavenona. Alohan'ny handaozana an'i San Lorenzo del Escorial dia aza adino ny manandrana sifotra sy donky misy anisa.
Ity tanàna ity any atsimo atsinanan'i Madrid izay eo amoron'ny renirano Tajuña dia Kompana ara-tantara-kanto. Tokony ho hitanao aminy ny mampiavaka azy Majistra Plaza, misy trano karazana malaza namboarina teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Izy io dia iray amin'ireo ohatra tsara indrindra amin'ny kianja mitafo Castilian.
Toy izany koa, mendrika ny mitsidika ny fiangonan'ny Lady's of the Assuming, izay manambatra ny fomba Gothic, Plateresque, Renaissance ary Baroque ary misy ny fiheverana ny Virjiny nosoratan'i Francisco de Goya.
Ary koa izy lapan'ny kaontin'i Chinchón; ny Clock Tower, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ary ny efitranon'i San Agustín, parador de turismo ankehitriny, ary Las Clarisas, amin'ny fomba Herrerian. Ary farany, aza miala ao an-tanàna raha tsy manana vera Chinchón, zava-pisotro mahazatra anisy an-tanàna.
Kianja lehibe Chinchón
Any amoron'ny fitahirizana Santillana, Manzanares dia manambatra lova mahatalanjona mahafinaritra miaraka amina toerana mbola misy sandan'ny ekolojika avo kokoa. Ity farany ity dia noho ny vanim-potoanan'ny kaominaliny, efa ho fito hekitara no tafiditra ao Valan-javaboary Sierra de Guadarrama ary ny ambiny ao amin'ny Faritra an'ny Basin'i Manzanares ambony. Noho izany, raha mitsidika an'ity tanàna ity ianao dia hanana teboka tsara hanombohana fitsangantsanganana an-tendrombohitra sy fanaovana fanatanjahan-tena hafa eny an-tendrombohitra. Amin'izany dia azonao atao ihany koa ny manararaotra mahita ny hermitage an'ny Nuestra Señora de la Peña Sacra, eo an-tampon'ity havoana ity ary manomboka amin'ny taonjato faha-XNUMX.
Mikasika ireo tsangambato misy azy, tsy maintsy ho hitanao ao Manzanares ny fametrahana izany Lapan'i Mendoza, izay natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX fa iray amin'ireo notehirizina tsara indrindra tany Espana. Ao anatiny, azonao atao koa ny mitsidika ivon-toerana fandikana medieval. Ny tranobe taloha an'ny Manzanares el Real dia tsy nanam-bola firy tamin'ny fiarovana azy, na dia azonao atao aza ny mitsidika azy.
Ho an'ny ampahany, ny fiangonan'ny Tompon'ny lanezy Izy io dia natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na dia namboarina tamin'ny faha-XNUMX aza. Noho io antony io, ny portico-ny dia amin'ny endrika Renaissance. Ho fanampin'izany, ao amin'ny zaridainany anatiny dia azonao atao ny mahita stelae amin'ny tranom-paty Basque tamin'ny taonjato XII sy tamin'ny fomba Visigothic.
Misy ihany koa lovia mahazatra ao Manzanares. Tsy maintsy manandrana ny ovy ao anaty vilany miaraka amina zanak'osy sy ny bitro namboarina na namboarina ianao.
Patones avy any ambony
Ity tanàna kely ity dia zara raha manana lova lehibe, ny fiangonan'i san jose, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ary ny hermitage an'ny Virgen de la Oliva, tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary tamin'ny fomba Mudejar Romanesque. Fa holazainay aminao izany rehetra Patones dia tsangambato. Satria vita amin'ny vato fisaka ny tranony ary mampiseho maritrano mahazatra. Ny lokon'ireto tranobe ireto dia mahatonga ity tanàna ity sy ireo hafa mitovy aminy fantatra amin'ny anarana hoe "tanàna mainty".
Akaiky an'i Patones no misy anao Lava-bato Reguerillo, ny tena manan-danja indrindra amin'ny resaka cave ao amin'ny Community of Madrid. Ary azonao atao koa ny mahita ny tohodrano Pontón de la Oliva miaraka amina fepetra Lakandranon'i Canal de Isabel II.
Tsy afaka miditra an-tongotra an-tongotra fotsiny ianao ary, na dia tsy nisy mponina aza, maro amin'ireo trano taloha no trano fandraisam-bahiny, trano ambanivohitra ary trano fisakafoanana. Raha ny fanazavana, any no ahafahanao mihinana zaza minono mahafatifaty.
Ho famaranana, ireo izay natoronay anao dia dimy amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra azonao jerena akaikin'i Madrid. Na izany aza, misy maro hafa toa Rasca mangatsiaka, akaikin'i Peñalara; Torrelaguna, miaraka amin'ny tanànany taloha mahafinaritra sy ny fiangonany Santa María Magdalena mahavariana; Cercedilla, eo akaikin'ny seranan-tsambon'i Navacerrada, na Ny Hiruela, miaraka amin'ireo trano vato sy adobe mahazatra azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Tanàna mahafinaritra manakaiky an'i Madrid
Fizahan-tany divay any Espana
Inona no ho hita any Écija